Qatar oo sare u qaadeysa taageerada ay siiso Soomaaliya - Horseed Media • Somali News
October 8, 2021World News
Qatar oo sare u qaadeysa taageerada ay siiso Soomaaliya
Dowladda Qatar ayaa sheegtay in ay sare uqaadday taageeradii iyo xiriirkii walaaltinimo ee kala dhaxeeyay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Bayaan ay fadhiga 48-aad ee golaha xuquuqul Insaanka Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ka jeedisay Marwo Jawhara Al-Suwaidi, oo ah Ku-xigeenka wakiilka Joogtada ah ee Dowladda Qatar ee QM fadhigeeduna yahay Geneva ayaa lagu sheegay inay sii wadayaan bixinta gargaarka iyo taageeridda mashaariicda horumarineed ee Soomaaliya.
Al-Suwaidi ayaa sheegtay in Dowladda Qatar ay ku nuuxnuuxsanayso caqabadaha hortaagan iyo khataraha dhanka amniga, argagixisada, faafitaanka Covid-19, abaaraha, fatahaadaha iyo waxyaabo kale.
Bayaanka Dowladda Qatar ayaa lagu sheegay muhiimadda sida loogu baahan yahay dhammaan dhinacyada Soomaalida inay is-xakameeyaan, oo ay sii wadaan wada-xaajoodka Qaran, iyagoo ay ka go’an tahay inay qabtaan doorashooyin nabdoon, hufan, loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo waqtigii loogu talagalayna ku qabsooma.
Mohamed Abdullahi Said says
Was wax laga xumaado in dalkeenu uu weli
Gacmo hoorsi uu ku jiro. Goorma ayuu is bixidoona dalku baryada uu gacan shisheeyu wax uga fadhiyo.